Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada(Bogga 29)
Sida loo nadiifiyo loona dayactiro tubbada musqusha
2020 / 07 / 09 10330
I. Tusmooyinka nadiifinta fudud ee tubooyinka lagu nadiifiyo tubbada ma aha wax dhib badan, kaliya xafid, waxayna socon doontaa muddo dheer. 1. tubooyinka naxaas ah, hadaad ubaahantahay inaad nadiifiso dusha sare, waxaad…
Sida looga saaro tuubbada biyaha kulul iyo kuwa qabow
2020 / 07 / 09 8847
1. Dami badhanka ugu weyn ee tubada kulul iyo qabow, raadso dhibcaha casaanka iyo buluuga ah gacanta hoostiina ku qabo oo gacantaada ku xir si aad u muujiso dalool yar. 2. Fiiri daloolka yar gacanta gacanta si aad u aragto i ...
Doorka filter nadiifka ah ee biyaha
2020 / 07 / 09 9764
Mashiinka biyaha nadiifka ah waa waxa aan inta badan ugu yeerno mashiin biyo nadiif ah. Mashiinka biyaha nadiifka ah wuxuu adeegsadaa tikniyoolajiyadda osmosis-ka ee cadaadiska hooseeya, oo si wax ku ool ah u saari kara kaalshiyamka, magnesium, bakteeriyada, ...
Hababka khaladaadka iibsiga tubada
2020 / 07 / 09 8116
1. tubooyinka soojiidashada ayaa ah tubooyinka ugu badan ee biyuhu ku shaqeeyaan Biyo-soo-jiidashada kaliya ma soo saaraan tiro yar oo biyo ah, laakiin sidoo kale waxay ku iibiyaan qiimo aad u sarreeya oo qaali ah si loo ilaaliyo. Fau-dinta isticmaalka qoyska…
Istaraatiijiyada dayactirka tubada
2020 / 07 / 09 9475
Nadiifinta tubada biyaha ma aha wax dhib badan, kaliya xafid, oo waxay socon doontaa muddo dheer. 1. Qubooyinka buluuga ah, hadaad ubaahantahay inaad ku nadiifiso dusha sare, waxaad ku nadiifin kartaa biyo ama saabuun, ...
2020 / 07 / 09 7975
2020 / 07 / 09 8188